Madaxweynayaashii hore ee Mareykanka oo ka qeyb galay janaazadii John McCain… – Hagaag.com
Madaxweynayaashii hore ee Mareykanka oo ka qeyb galay janaazadii John McCain…
Posted on 2 Seteembar 2018 by Admin in World // 0 Comments
Madaxweynayaashi hore ee Mareykanka Barack Obama iyo George W Bush aya waxay ka qayb galeen baroordiiq loo sameeyey Senetor John McCain oo lagu qabtay Kaniisad ku taallo magaalada Washington.
McCain oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay askartii Mareykanka ee ka soo qeyb qaatay dagaalkii Vietnam ayaa waxaa uu muddo la xanuunsanayay Kansarka ku dhaca maskaxda wuxuu geeriyooday toddobaad ka hor islamakaana ah siyaasi muddo dheer siyaasadda Mareykanka ku soo jiray wuxuu ku dhintay 81 jir.
Gabadh uu dhalay McCain oo madasha looga baroordiiqayey aabbaheed khudbad ka soo jeedisay ayaa waxay sheegtay inuu aabbaheed uu dhaliili jiray siyaasadda Madaxweyne Trump uu dalku ku hoggaaminayo.
Madaxweyne Trump kama soo qayb gelin munaasabadda baroordiiqda ee McCain loo sameeyey.
Labada mas’uul ee ka soo wada jeeda Xisbiga Jamhuuriga oo shaqsi ahaan iyo siyaasad ahaanba ay aad ugu kala duwanaayeen, ayaa waxay qoyska McCain halkaa ka caddeeyeen mowqifka McCain uu ka istaagay siyaasadda Trump iney u cuntamin Madaxweyne Donald Trump.
Shaqsiyaadka ka tirsan maamulka Trump ee baroordiiqa McCain ka soo qayb galay waxay ahaayeen gabdha uu dhalay madaxweyne Trump Ivanka iyo wiilka uu seeddiga u yahay Jared Kushner.
Madaxweynihi hore ee Mareykanka Obama oo munaasabadda ka soo qayb galay ayaa wuxuu ahaa musharrixi McCain kaga guuleystay doorashadi madaxweynanimada Mareykanka ee 2008-dii dhacday.
Wuxuuna Obama uu McCain uu ku tilmaamay “qof aan caadi ahayn”, dagalyahan, hoggaamiye, halyey, oo kaalin mug leh ku lahaa iney awoodda Mareykanka sii jirto.
Madaxweynihi hore ee Mareykanka Bush oo isagana doorashadi 2000 McCain kaga guuleystay doorashada ayaa wuxuu isna halkaa ka sheegay inuu McCain ahaa geesi, daacadnima badan oo isku kalsoon.
Waxuuna sheegay inuu ku xusuusto inuu ahaa nin aan la gabbanin waxa uu rabo inuu meel mariyo ama uu doonayo inuu mucaarado wax kasta oo uu u arko iney maslaxad u tahay dalkan wax walbana uu u mari jiray.
Wuxuuna qayb libaax uu ka qaatay in wax laga beddelo sharciga qoxootiga, maliyadda iyo deegaanka, iyada oo mowqifka uu sharciyadaasi meel marintooda iska taagayna cadow iyo mucarad badan uu ku yeeshay.
Waxaana munaasabadda baroordiiqa John McCain ka soo qayb galay siyaasiyiin, masuuliyiin, jilayal iyo fannaaniin caan ah.